Momba anay - Goodao Technology Co., Ltd.
Inflator pneu digital
Inflator pneu metal
Kamiao Air Compressor
Inflator pneu ho an'ny môtô elektrika
Fanilo & Fanilo
Fonosana fanamboarana kodiarana
Kitapo fanamboarana kodiarana
Yuyao Jiaqiao Auto Accessories Co., Ltd. dia orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana karazana compressor rivotra fiara 12VDC (inflator kodiarana fiara), mpanadio banga fiara, fitaovana sy kojakoja maika eny amoron-dalana, sns. tanàna izay 1 ora mitondra fiara avy any Ningbo Lishe seranam-piaramanidina (Ningbo Port), ary 2 ora mitondra fiara avy any Hangzhou na Shanghai. Ny orinasa dia mandrakotra faritra 1500 metatra toradroa ary misy mpiasa 80, vokatra fanondranana manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny ankamaroan'ny fanamarinana iraisam-pirenena toy ny CE, RoHS, sns.
Amin'ny maha-iray amin'ireo orinasa lehibe sy matihanina, mifototra amin'ny politika momba ny kalitaon'ny "mitodika amin'ny kalitao, ny mpanjifa voalohany", dia nametraka rafitra fanaraha-maso kalitao tsara sy mahomby. ISO 9001: 2000 fanamarinana rafitra fitantanana kalitao dia azo tamin'ny 2006.
Mba hanamafisana ny tombotsoan'ny fanamby amin'ny fifaninanana eran-tany amin'ny vidiny sy hifehezana tsara kokoa ny kalitao, dia namolavola atrikasa harware manokana izahay, atrikasa maotera, atrikasa fanindronana, atrikasa famoriana ary atrikasa fanamboarana. Ny ankamaroan'ny ampahany lehibe amin'ny vokatray dia novokarina tao amin'ny orinasa, ny vokatra vita rehetra dia avy amin'ny tsipika mivory. Miaraka amin'ireo fitaovana famokarana matihanina sy ekipa R & D tena tsara, ny fahaiza-mamokatra dia mahatratra 50.000 pcs compressor rivotra na mpanadio banga isam-bolana. Nanangana foibe fanaraha-maso ny kalitao ihany koa izahay, ekipa mpamokatra vokatra.
Mandritra izany fotoana izany, mba hanatsarana ny tombontsoan'ny fanamby amin'ny toekarena manerantany amin'ny serivisy tsara, miorina amin'ny fanamarinana ny rafitra fitantanana ISO9001, ny orinasa dia nandray ny rafitra fitantanana ERP, OA ary E-business. Hanohy hampiditra teknolojia avo lenta sy traikefa amin'ny fitantanana ao an-toerana sy any ivelany ihany koa izahay, ary hiezaka hanatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny fifaninanana. Ny ankamaroan'ny vokatray dia manana mari-pankasitrahana iraisam-pirenena ankehitriny.
ADDRESSNo. 1279 Tanjialing West Road, Lanjiang Street, Yuyao, Zhejiang, Sina
FOTOANA ASA08:30 ~ 17:30 alatsinainy hatramin'ny asabotsy